Siri mivazivazy momba ny "hiverina amin'ny andro ho avy" | Vaovao IPhone
Andro izao 21 Oktobra amin'ny 2015, ny andro tokony hahatongavan'i Marty McFly, miaraka amin'ny sakaizany ary i Doc Brown, hamaha ny olan'ny fianakaviana McFly sasany. Toy ny mahazatra, Apple dia nanavao ny Valiny Siri ka mamaly ny «Andro feno fiverenana amin'ny ho avy», baiko izay hamaliany dimy (na ireo nahavita naka azy hatramin'ny 7) fotoana avy amin'ny trilogy malaza. Azonao atao ny manandrana azy io, fa eto ambany koa dia misy pikantsary sy fanazavana ho an'ny valiny tsirairay.
1 1,21 gigawatts
2 Hoberboard sy kapa misy kofehy robo
3 Ny tsy fitovizan'ny ray aman-dreny
4 Sakafo tsy ampy rano
5 Antsantsa 19
1,21 gigawatts no angovo ilain'ny DeLorean hamatsiana ny Fluzo Capacitor, izay ilana fitetezana fotoana. Noho izany, amin'ny tapany voalohany dia mila mitarika ny herin'ny taratra mivantana amin'ny capacitor voalaza ianao.
Hoberboard sy kapa misy kofehy robo
Raha tadidiko tsara dia kiraro a miresaka Nike izay namehy tena ny kofehy The hovercraft no skateboard mavokely malaza izay mamoaka, zavatra mbola tsy hitako teny an-dalana, fa manantena ny hahita azy 😉
Ny tsy fitovizan'ny ray aman-dreny
Diso i Siri eto. Ity valiny ity dia noho ny tsy fitovian-kevitry ny fihaonana amin'ny ray aman-drenintsika talohan'ny nahabevohoka antsika sy andao hanova ny lasa, izay mety hahatonga antsika tsy hateraka. Amin'ny tapany voalohany miverina amin'ny ho avy, nihaona tamin'ny ray aman-dreniny i Marty ary nahatonga ny fianakaviany tsy hiorina intsony, noho izany ny rahalahiny dia nanomboka nanjavona tamin'ny sary nentiny. Raha mankany amin'ny ho avy isika dia tsy hisoroka ny fahaterahantsika mihitsy, satria efa teraka isika.
Sakafo tsy ampy rano
Ny pizza dia mitohy amin'ny anarana mitovy amin'ny 30 taona lasa izay, fa amin'ny sarimihetsika dia azo zahana tsy ampy rano ny sakafo, toy ny an'ny mpanamory sambondanitra. Hitan'i Marty tao an-tranony manokana amin'ny ho avy, izany hoe, amin'izao fotoana izao, izany hoe ny hoavin'ny 1985, ankehitriny misy antsika.
Ary ny valiny farany azoko tamin'ny Siri dia miresaka momba ilay sarimihetsika Antsantsa 19. Mandeha amin'ny arabe i Marty ary manandrana mihinana azy ny hologram goavambe iray. Izy io tokoa ilay afisy milaza ny ampolon'ny folon'ny Jaws. Heveriko fa tsy nahatratra izany lavitra izany isika, sa tsy izany?
[Fanavaozana] Amin'izao fotoana izao dia niarahaba azy tamin'ny Back to the Future day indray aho ary nilaza hoe 'Wow! Tonga ny ho avy! ”, Ka mety mbola manana valiny hafa vonona ianao. Aza misalasala manandrana ary manome hevitra raha nahazo vaovao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Siri » Siri mivazivazy momba ny "hiverina amin'ny andro ho avy"
Ny kiraro dia Nike
Ny Nike Air Mag manokana dia manokana
Any Amerika Latina dia capacitor flux io!
Ao amin'io firenena io dia fantatra amin'ny fomba hafa izy io noho ny hadisoana tamin'ny fandikan-teny
Salama Jordi. Raha ny tena izy dia Flux Capacitor ary heveriko fa amin'ny Espaniôla avy any Espana dia novain'izy ireo izany satria misy karazana «Flux» hafa mety ho ratsy ihany koa. Avia, ranoka hafa 😉 Raha tany Espana no nantsoina hoe «flux capacitor» dia tsy ho noraisina am-po izany.
iray amin'ireo valiny anio ao amin'ny lohasaha havoana ankalazain'izy ireo! ary ny iray kosa raha izao ny ho avy, rahampitso isika dia handeha any amin'ny ho avy hiverina any anio. korontana inona!
Mamaly an'i amanda
Fampitahana amin'ny sary eo anelanelan'ny iOS 9 sy Android 6 Marshmallow